May 2021 - Myanmar Man United.
ကာလရှည်ပစ်မှတ်‌ ဒေ့ါမွန်အသင်းမှ အင်္ဂလန်ကြယ်ပွင့်ကစားသမား ဆန်ချိုကို ခေါ်ယူဖို့ ပုဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ သ‌ဘောတူညီချက် ရခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ယူနိုက်တက်အသင်း
htet htet | 31/05/2021
ကာလရှည်ပစ်မှတ်‌ ဒေ့ါမွန်အသင်းမှ အင်္ဂလန်ကြယ်ပွင့်ကစားသမား ဆန်ချိုကို ခေါ်ယူဖို့ ပုဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ သ‌ဘောတူညီချက် ရခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ယူနိုက်တက်အသင်း ယူနိုက်တက်အသင်း သည် သူတို့ကာလရှည် စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ဒေ့ါမွန်အသင်းမှ အင်္ဂလန်ကြယ်ပွင့် တိုက်စစ် ကစားသမား ဆန်ချိုကို ခေါ်ယူဘို့. သဘောတူညီမှုရခဲ့ပြီလို့ မီဒီယာတွေကဖော်ပြနေကြပါတယ်။ ယူနိုက်တက်အသင်း သည် ဆန်ချိုကို ခေါ်ယူဖို့အတွက် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းက ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီး သဘောတူညီမှုရဖို့နီးစပ်ခဲ့ပေမယ့်
အဓိကတိုက်စစ်မှူး ဟယ်ရီကိန်းရဲ့နေရာအတွက် အစားထိုးဖို့ မာရှယ်ကို ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင် ၃၅သန်းနဲ့ စတင် ကမ်းလှမ်းလာတဲ့ စပါးအသင်း
အဓိကတိုက်စစ်မှူး ဟယ်ရီကိန်းရဲ့နေရာအတွက် အစားထိုးဖို့ မာရှယ်ကို ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင် ၃၅သန်းနဲ့ စတင် ကမ်းလှမ်းလာတဲ့ စပါးအသင်း ပရီးမီးယားလိဂ် နာမည်ကြီးအသင်း ဖြစ်တဲ့ စပါးအသင်းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ပြိုင်ဘက်အသင်း ဖြစ်တဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ပြင်သစ် တိုက်စစ်မှူး ဖြစ်သူ အန်တိုနီယို မာရှယ်အတွက် တရားဝင် ကမ်းလှမ်းမှုတခု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ပြင်သစ်အခြေစိုက်
ယူနိုက်တက်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ မျှော်လင့်နေတယ်လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ အက်သလက်တီကို အသင်းကွင်းလယ်ကြယ်ပွင့်
ယူနိုက်တက်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ မျှော်လင့်နေတယ်လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ အက်သလက်တီကို အသင်းကွင်းလယ်ကြယ်ပွင့် အက်သလက်တီကို အသင်းကွင်းလယ်ကစား သမား ဆောလ်နီဂွတ်စ် ဟာ နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့မှာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ ပိုမိုနှစ်သက်နေတယ်လို့ သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။အသက် (၂၆)နှစ်အရွယ်ရှိ ကွင်းလယ်ကစား သမား ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ အပြောင်း အရွှေ့(၂)ကြိမ်လောက်က မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အသင်းကို
ယူရို 2020 ပြိုင်ပွဲမတိုင်မီ ယူနိုက်တက်အသင်းပိုင်ရှင် ဂလေဇာမိသားစုအနေနဲ့ ရော်နယ်ဒိုနဲ့ အကြို သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီလို့ အင်္ဂလန်သတင်းဌာန‌များကဖော်ပြ
ယူရို 2020 ပြိုင်ပွဲမတိုင်မီ ယူနိုက်တက်အသင်းပိုင်ရှင် ဂလေဇာမိသားစုအနေနဲ့ ရော်နယ်ဒိုနဲ့ အကြို သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီလို့ အင်္ဂလန်သတင်းဌာန‌များကဖော်ပြ ကိုဗစ်ကြောင့် ဂျုဗင်တပ် အသင်းသည် လစာအများအပြားပေးချေနေရတဲ့ ကစားသမားတွေကို ရောင်းချဖို့ ရှိနေပြီး ရော်နယ်ဒိုလည်း ရောင်းချမယ့်စာရင်းထဲမှာ ပါဝင်နေကြောင်းသိရပါတယ်။ အသင်းကနေ ထွက်ဖို့ သတင်းတွေထွက်နေတဲ့ ရော်နယ်ဒိုကို ခေါ်ယူဖို့အတွက် ယူနိုက်တက်အသင်းပိုင်ရှင်ဂလေဇာမိသား စုနဲ့ ရော်နယ်ဒိုတို့ တိတ်တဆိတ်
အီတလီမြေကို အောင်နိုင်ပြီးနောက် ပရီးမီးယားလိဂ်ကို ပြန်လာတော့မ့မယ့် သရဲနီကပ်ပတိန်ဟောင်း လော့ဒ်ယန်း
အီတလီမြေကို အောင်နိုင်ပြီးနောက် ပရီးမီးယားလိဂ်ကို ပြန်လာတော့မ့မယ့် သရဲနီကပ်ပတိန်ဟောင်း လော့ဒ်ယန်း မန်ယူအသင်းမှနေပြီးအင်တာမီလန်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တဲ့အဂ်လန်ညာနောက်ခံကစားသမားအက်ရှလေယန်းဟာ အင်တာမီလန်အသင်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းတိုးချုပ်ဆိုခြင်းမပြတော့ဘဲသူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝစတင်ရာဝက်ဖိုစ့်အသင်းကိုပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့တော့မယ်လို့သိရပါတယ်။ မူလကအပ်ရှလေယန်းဟာအင်တာမီလန်အသင်းနဲ့အီတလီစီးရီးအေအမှတ်ပေးဖလားရရှိပြီးနောက်မှာ နောက်ထပ်တစ်ရာသီထပ်မံသက်တမ်းတိုးပြီးအီတလီမှာနောက်ထပ်တစ်နှစ်ဆက်လက်နေထိုင်ဖို့စီစဉ်ထားပေမယ့်နည်းပြကွန်တီနှုတ်ထွက်သွားမှုနဲ့အတူယန်းရဲ့အိပ်မက်တွေပြိုလဲခဲ့ရပါတယ်။ ငွေကြေးအကြပ်အတည်းကြောင့် စီးရီးအေချန်ပီယံအသင်းဟာ ယန်းကိုစာချုပ်ဆက်မချုပ်နိုင်တာကြောင့် ယန်းတစ်ယောက် အိမ်ပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါပြီ။ ယန်းဟာသူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝစတင်ရာအသင်းဖြစ်တဲ့ ဝက်ဖိုစ့်အသင်းထံပြောင်းရွှေ့ကြေးအလွတ်နဲ့ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့တော့မှာပါ။ ဝက်ဖိုစ်အသင်းကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီက လိဂ်ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲမှာဒုတိယရခဲ့တာကြောင့် လာမယ့်ဘောလုံးရာသီမှာပရီးမီးယားလိဂ်ကို တန်းပြန်တတ်လာခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့် မန်ယူအသင်းခေါင်းဆောင်ဟောင်းကို ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ တဖန်ပြန်မြင်ရတော့မှာပါ။ ယန်းဟာ မန်ယူအသင်းထံကို၂၀၁၁ခုနှစ်က
ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား လွဲချော်ခဲ့သည့် မြို့ခံပြိုင်ဘက် မန်စီးတီးအား Troll လိုက်တဲ့ မန်ယူနောက်ခံလူဟောင်း အီဗရာ
ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား လွဲချော်ခဲ့သည့် မြို့ခံပြိုင်ဘက် မန်စီးတီးအား Troll လိုက်တဲ့ မန်ယူနောက်ခံလူဟောင်း အီဗရာ မန်ယူအသင်း၏ နာမည်ကျော် ပြင်သစ်နောက်ခံလူဟောင်း ပက်ထရစ်အီဗရာသည် ချယ်လ်ဆီးကို ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲတွင် ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည့် မန်စီးတီးအသင်းအား Photoshop လုပ်ထားသည့်ပုံဖြင့် လှောင်ပြောင်ထိုးနှက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ အီဗရာသည် Troll ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုဖြစ်သည့် လူသိများထင်ရှားသည့်ပုံတစ်ပုံတွင် လှောင်ပြောင်သရော်လိုသည့် စာသားများထည့်သွင်းကာ မန်စီးတီးအသင်းကို ထိုးနှက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယူနိုက်တက်ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အသည်းကိုခွဲလိုက်တဲ့ ရော်နယ်ဒိုရဲ့ချစ်သူ ဂျီအိုဂျီနာ ရိုဒရီဂွက်စ်
ယူနိုက်တက်ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အသည်းကိုခွဲလိုက်တဲ့ ရော်နယ်ဒိုရဲ့ချစ်သူ ဂျီအိုဂျီနာ ရိုဒရီဂွက်စ် ရော်နယ်ဒို ကတော့ ဂျုဗင်တပ်စ် အသင်းဟာ နည်းပြသစ်အဖြစ် အယ်လီဂရီကို ခန့်အပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာ သူ့နဲ့ အီတလီကလပ်တို့ရဲ့အနာဂတ်ဟာ မသေချာမရေရာမှုတွေရှိနေတယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရော်နယ်ဒို နဲ့ဂျုဗင်တပ်စ် အသင်းတို့ချုပ်ဆိုထားတဲ့ စာချုပ်ဟာ တစ်ရာသီတော့သာ ကျန်ရှိတော့တာဖြစ်ပြီး သူ့ကို ခေါ်ယူဖို့ အသင်းဟောင်း မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်၊ ပီအက်စ်ဂျီ အပါအဝင် အသင်းကြီး
ယူနိုက်တက်ရဲ့ ယခုနွေရာသီအဓိကပစ်မှတ် ဆန်ချိုကို ပြောင်းရွှေ့ကြေး သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပြီး မီးစိမ်းပြလိုက်တဲ့‌ ဒေါ့မွန်
ယူနိုက်တက်ရဲ့ ယခုနွေရာသီအဓိကပစ်မှတ် ဆန်ချိုကို ပြောင်းရွှေ့ကြေး သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပြီး မီးစိမ်းပြလိုက်တဲ့‌ ဒေါ့မွန် ဂျာမနီ က ထွက်ပေါ်နေတဲ့ သတင်းတွေအရတော့ ဒေါ့မွန်အသင်း အသင်းသည် လာမယ့် နွေရာသီ အပြောင်းအရွေ့ ဈေးကွက်မှာ ယူနိုက်တက် တို့ အလိုရှိနေတဲ့ ဆန်ချို ကို 82 သန်း နဲ့ ကမ်းလှမ်းလာရင် လက်ခံသွားမယ်လို့ မီးစိမ်းပြလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုးရှားရဲ့ အနာဂတ်အစီအစဉ်မှာ ဟယ်ရီကိန်း မပါဝင်ဘဲ အဓိကပစ်မှတ်မှာ ဒေါ့မွန်ကြယ်ပွင့် ၂ယောက်သာဖြစ်
htet htet | 30/05/2021
ယခုနှစ် အဓိကပစ်မှတ်မှာ ဆန်ချိုဖြစ်ပြီး ‌လာမည့်နှစ်ဘောလုံးရာသီတွင် ဟာလန်းကို စာချုပ်ဖျက်သိမ်းကြေးပေးခေါ်မည် ဆိုးရှားရဲ့ အနာဂတ်အစီအစဉ်မှာ ဟယ်ရီကိန်း မပါဝင်ဘဲ ယခုနှစ် အဓိကပစ်မှတ်မှာ ဆန်ချိုဖြစ်ပြီး ‌လာမည့်နှစ်ဘောလုံးရာသီတွင် ဟာလန်းကို စာချုပ်ဖျက်သိမ်းကြေးပေးခေါ်မည် မန်ယူအသင်းသည် ဟယ်ရီကိန်းကို ပေါင်သန်း ၁၂၀ ပေး၍ ခေါ်ယူမည့်အစား ဆန်ချိုကိုခေါ်ယူပြီး နောက်ထပ် ၁၂ လစောင့်ကာ ဟာလန်းကို စာချုပ်ဖျက်သိမ်းကြေးပေး၍
ယူနိုက်တက်ကို မီးစိမ်းပြလိုက်တဲ့ အင်္ဂလန်ကြယ်ပွင့် ကွင်းလယ်ကစားသမား ဂရေးလစ်
ယူနိုက်တက်ကို မီးစိမ်းပြလိုက်တဲ့ အင်္ဂလန်ကြယ်ပွင့် ကွင်းလယ်ကစားသမား ဂရေးလစ် ဗီလာအသင်းမှ အင်္ဂလန်ကြယ်ပွင့် ကွင်းလယ် ကစားသမား ဂရေးလစ် ကတော့ လာမယ့် နွေရာသီ အပြောင်းအရွေ့ ဈေးကွက်မှာ ယူနိုက်တက် အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့တော့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထွက်ပေါ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ပရိသတ် 1 ယောက်က ဂရေးလစ် ကို ယူနိုက်တက်ကို